Shirkii 40aad ee dowladaha Khaliijka oo ka furmay dalka Sacuudiga.
Tuesday December 10, 2019 - 11:32:08 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Magaalada Riyaad ee caasimadda u dowladda Sacuudiga waxaa ka furmay shirkii Afartanaad ee ay isugu yimideen Lixda dowladood ee ku bahoobay golaha iskaashiga Khaliijka.
Kulankan oo uu shir guddoominayo Salmaan Bin Cabdul Caziiz oo ah boqorka Sacuudiga ayaa lagu gorfaynayaa khilaafka dhanka siyaasadda ee ka dhax aloosan dowladaha dhaca Mandiqadda Khaliijka.
R/wasaaraha xukuumadda Qadar ahna wasiirka arrimaha gudaha ninka lagu magacaabo Cabdalla Bin Naasir Aala Khaliifa ayaa madasha shirka ku sugan waxaana ka qeybgalka shirka ka baaqdsaday Amiirka Qadar oo horay si rasmi ah loogu martiqaaday.
Wariyaal ku sugan madasha shirka ayaa soo sheegay in aysan ka muuqan saansaan xal looga gaarayo khilaafaadka ragaadiyay dowladaha Khaliijka oo dhammaantood dabadhilifyo u h Mareykanka iyo reergalbeedka.
Sanaddii 2017 ayuu khilaafka ugu xooggan ka dhax dilaacay dowladaha Gacanka ee hodonka ku ah naftada iyo Gaaska kadib markii ay Sacuudiga iyo Imaaraatka Carabta ay hareerayn dhan walba ah kusoo rogeen dowladda Qadar.
Like Saar Page-ka SomaliMeMo ee Facebook.
Caabuqa Covid19 oo kusoo rogaal celiyay dalka Faransiiska.